Yemagariro Media Nyanzvi
Zvemagariro Midhiya Kushandisa Hakusi Nyanzvi Kugadzira
Chipiri, July 14, 2009 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Zvakare zvakare nhasi ini ndakakokwa kune mashoma ezviitiko - mumunhu uye kuburikidza newebhuinar - kuti uwane mukana kune a social media nyanzvi uye kwavo kutora pasocial media kushambadzira. Sezvo ini ndichiongorora ma profiles avo, yavo yeLinkedIn info, avo saiti uye avo mablog, ini handiwane irwo ruzivo rwakakosha runotsigira fungidziro yekuti ivo inyanzvi dzezvemagariro.
evanhu vezvenhau nyanzvi? Chaizvoizvo? Zvichida vane makumi ezviuru zvevateveri veTwitter, mazana emashoko pane avo Facebook madziro, uye nhengo mune gumi nemaviri kana zvakadaro network. Zvichida nekuti ivo vari charlatan, shark kana geek.
Ini ndaizoronga seiko pasocial media nyanzvi? Ini ndinoda Peter Shankman's runyorwa rwe hunhu uye kusabvumirwa kwevemagariro enhau nyanzvi. Ini ndaizowedzera - kuti kana zviri zvebhizinesi - ndinoda kuona a runyorwa rurefu rwechiyero mhedzisiro uye mareferenzi kune akasiyana makambani uye marongero.
Ini ndinozvipatsanura ini se nyanzvi? Ndino - asi kwete nekuti ini ndinoti ndinozvinzwisisa zvese. Uyu mudiki wepakati uye kuchinja kwawo zuva nezuva. Kuchinja maitiro ebhizinesi. Iri kuchinja maitiro evatengi. Makumi gumi ezviitiko kubva mukushambadzira kwakananga uye kushambadzira kwedhatabhesi, kushambadzira email, nezvimwewo zvakandigonesa kuti ndigone kuchinja mamiriro angu azvino.
Handizviti ndiri nyanzvi nekuda kweruzivo rwangu rwemagariro enhau… ndinozviti ndiri nyanzvi nekuda kwebasa randakaitira makambani madiki nediki kuti akure bhizinesi ravo, kuchengetedza uye kukwidziridza vatengi, uye kudzikisa mafoni ekufonera kunyatso kushandisa vezvenhau.
Ini ndinozviti ndiri nyanzvi nekuda kwebasa randiri kuita parizvino?
apo VP ye blogging chikuva, isu takabatsira akawanda mabhizinesi kusimudzira yavo yemagariro midhiya uye nzira dzekutsvaga kutyaira kwakadzika kushambadzira kuedza.
Ndine yangu yakabudirira Nyowani Media Agency iine nhoroondo yakasimba yekubatsira makambani kuvandudza nekuita kwavo kwehukama marongero.
Kubatanidzwa uye otomatiki maturusi andakagadzira mu Blogging, e, Video uye nhare mbozha yasvika makumi ezviuru emakambani.
The 2 mumagariro mitambo Ini ndakabatsira kutanga uye kuramba ndichibatsira kumhanya.
Yangu bhurogu inotambanudza makore mashanu + (kuwedzera mamwe akati wandei pane mamwe mapuratifomu) achitaura pasocial media uye tekinoroji yekutengesa
AIHWA! Hapana chimwe cheizvi chinondikwanirisa se nyanzvi.
Ini ndinozvidaidza nyanzvi nekuda kwezvikonzero zvitatu.
Mabhizinesi anotsvaga nyanzvi, kwete gurus uye geeks.
Kuzvidaidza kuti nyanzvi inozvibata pachidanho chepamusoro uye kutarisira nekambani yandinofanira kuzadzisa.
Ini ndinokwana tsananguro:
Nyanzvi mumwe munhu anozivikanwa zvakanyanya senzvimbo yakavimbika yehunyanzvi kana hunyanzvi hunyanzvi hwekutonga kana kusarudza nenzira kwayo, nemazvo, kana nehungwaru hunopihwa chiremera uye chinzvimbo nevezera ravo kana veruzhinji mune yakasarudzika yakasarudzika nzvimbo. Nyanzvi, kazhinji kazhinji, munhu ane ruzivo rwakawanda kana kugona mune imwe nzvimbo yekudzidza.
Ini ndakangwara kupfuura vamwe vanhu vese vari kunze uko? Kwete.
Ini ndinoziva zvese nezve pasocial media? Zvirokwazvo kwete.
Dzimwe nyanzvi dzinogara dzichibvumirana neni here? Kwete mukana!
Basa rangu rese rakabudirira here? Kwete - asi zvizhinji zvacho zvine.
Ini ndinotenda kuti ndanga ndiine hunyanzvi hwekuongorora mashandiro ebhizinesi, masvikiro ekushambadzira, uye kuona kuti tekinoroji ingakwenenzvera sei mukaha. Ini handidaro nyepera vatengi uye uvataurire kuti vanofanirwa kuve chikamu chezvemagariro kana vachishuva kurarama. Ini ndinogovana navo mazhinji ebudiriro, zvakadaro! Iyo svikiro ini pachezvangu ndinotenda mairi uye ndinovimba kuona kuwanda kutorwa kwe - kwete nekuti inogona kushandisirwa nemabhizinesi akaipa - asi nekuti inogona kubvisirwa nemabhizimusi makuru.
Ndinotenda vezvenhau vanobatanidza mabhizinesi netarisiro, inovaka hukama hwakavandudzwa pakati pevatengi nemakambani, inosundira makambani kugadzirisa basa revatengi, inovaka pachena, uye inokurudzira hutungamiriri hwekufunga, tarenda rezvemabhizimusi uye shanduko ... zvese zvakanaka zvebhizinesi.
Uye izvo, shamwari dzangu, ndezvangu nyanzvi pfungwa.
PS: Ndine chokwadi kana ukadzokera kumashure zvakakwana mubhurogu yangu kana makomendi pane mamwe mabloggi andakabvarura mune vashoma vanhu vakazvisarudzira hunyanzvi hwavo. Zvino chijana chako. 🙂
Jul 14, 2009 pa 8: 48 AM
Ndinoona zvichinakidza kuti mumabloggi maviri akasiyana ndinoverenga kukosha kwe 'nyanzvi' kune nharo. Muzvinyorwa zviviri zvandakaverenga pakutanga zvairehwa kufuratira (uyezve kusahaya) chero munhu anoshandisa izwi rekuti 'nyanzvi' sechikamu chezvavanoda, asi iwe unotendeuka uye uchitaura chimwe chezvinyorwa zvakafanana zveblog sechikonzero chekukudaidza iwe nyanzvi. , uye mushure mekutaura nyaya yacho zvinoreva kuti uri nyanzvi. Saka ndeipi? Ndinovimba newe here nekuti unozvitora senyanzvi uye unotaura Shankman, kana kuti ini ndinoregeredza zvese zvaunotaura kubva pano zvichienda mberi nekuti unozvitora senyanzvi uye taura Shankman? Usandifungidzire zvisizvo, ndinotenda zvese zvawakaita, uye ndinotevera bhurogi rako saka zviri pachena ndinowana kukosha mune zvaunotaura… asi kupokana seizvi ndosaka vatengi vangu vavhiringika.
Jul 14, 2009 na12:28 PM
Hi Robert! Ini ndinobvuma zvachose kupokana - kunyangwe hunyengeri - pane yangu mune ino post. Ini ndinonongedzera kune mamwe mapost nekuti ndinoda kuti nhaurirano ienderere mberi nemaonero akasiyana. Kare, ndainzvenga shoko rokuti 'nyanzvi'. Sezvo ini ndichiramba ndichiita basa rakawanda mumunda, zvakadaro, ndiri kuona vanhu vazhinji vachishandisa zita rekuti 'social media nyanzvi'.
Ndinozviwana ndiri pane imwe nguva yebasa rangu apo ndine hanya kuti mabhizinesi ari kunyengedzwa nevanozviti 'nyanzvi' asi mabhizinesi anoramba achivatsvaga. Ndinoramba ndichiona bhizinesi richienda kune vanhu vasina ruzivo kana 'hunyanzvi'? Kana - ndinozvizivisa ini nyanzvi, kuratidza kukosha kwangu, uye kuwana bhizinesi iro?
Ndiri kuzozvidaidza kuti inyanzvi kubva pano zvichienda mberi nekuda kwemabhenefiti ebhizinesi. Zvakare - ndinotenda iwe nevamwe vaverengi vangu vakandibata kune mwero wepamusoro!
Ndatenda - ndinotenda chaizvo mhinduro!
Jul 14, 2009 pa 6: 14 AM
Ndinobvumirana newe Douglas. Zvinotora makore eruzivo nekubuda kwakanaka (kusanganisira kutadza kwemunhu, tinongoverenga kuti munhu amuka sei mushure mekutadza kwakadaro ndosaka zvichiri zvakanaka) kunzi nyanzvi. Kuva nezviuru zvevateveri pa Twitter hakuite imwe.
Jul 14, 2009 na12:51 PM
Mune imwe chirango chandakaona kupokana kwakawanda pamusoro pekuti ndiani nyanzvi, ndiani asiri uye chii chinoumba maitiro ekuwana chinzvimbo chehunyanzvi. Ini ndinonzwisisa kunetsekana sezvandakaitawo, ndaona vanhu vazhinji vanozvidaidza kuti nyanzvi dzenhau dzemagariro asi vasina hunyanzvi hwekushambadzira kuti vaenderane nazvo. Ivo vanoziva maturusi, asi hazvivaite nyanzvi yekushambadzira vachishandisa social media sechiteshi.
Ndanga ndiri mushambadzi kwemakore akawanda kupfuura zvandinoda kubvuma, uye ndakadzidza chirango chekutengesa mumatanho ese, ndichishandisa marudzi ese ehunyanzvi, kubva pakuronga kusvika pakuitwa. Kuwedzera social media seimwe chiteshi chekushambadzira kufambira mberi kwechisikigo uye ndeimwe, zvinosuruvarisa kuti vatengesi vazhinji vakafuratira kusvika nguva pfupi yadarika pavakaona kuti vari nani vaone zvinhu izvi.
Asi ivo chete vanhu vanogona kukuzivisa iwe nyanzvi vatengi vako uye vatengi. Ndivo humbowo hunosimbisa izwi.
Jul 15, 2009 pa 4: 13 AM
Ndinobvumirana nemashoko ako nemoyo wese, izwi rekuti "nyanzvi" rinoshandiswa nenzira nyore. Ndinoziva vanhu vakati wandei vanozvishambadza senyanzvi mune zvemagariro media asi vachibira vamwe vanyori mazano nemaitiro uye vovadaidza ivo pachavo. Ndiri mukugadzirisa izvozvi kugadzira nekuvaka nzira yekushamwaridzana kune imwe yenyika dzemapoka makuru ezvivakwa uye izvo zvave kundivhura ziso chairo. Ini ndinobvumirana naDeborah mukutaura kwake, kuti vatengi nevatengi chete vanogona kukushongedza nehunyanzvi tegi. Ndichiri kudzidza gehena rakawanda uye ini handisi nyanzvi, asi ndiri kushanda pazviri. Chinyorwa chikuru
Jul 15, 2009 pa 4: 17 AM
Grrrrrrrrrrrrr. Kubhuya nekukurukura kunobvisa simba muhupenyu. Kushandisa simba kunobatsira here?
Jul 15, 2009 na5:12 PM
Ndinowanzo kubvumirana newe. Ndinogara ndichinzwa kuzvishambadza zvisinganzwisisike ndiine zita senge 'nyanzvi'. Zvakadaro, chokwadi ndechekuti mabhizinesi ari kutsvaga 'nyanzvi' uye ndivo chete vari kushandisa zita richawanikwa.
Jul 17, 2009 pa 2: 10 AM
Mukuziva uye kushanda newe pamapurojekiti akasiyana-siyana, ndinogona kutaura kuti ndinotsigira nemoyo wese kuzvireva kwako senyanzvi. Sezvawakataura, zita racho rinobva mukubudirira kwako pamwe nekukundikana kwako sezvakataurwa naDavid mumhinduro yekutanga. Zvichida zvinochembera newe, asi ndinoziva kuti kana ndiine mubvunzo nezvechimwe chinhu chine chekuita nehunyanzvi uye social media ndichawana mhinduro yakavakirwa pane zvakaitika, ruzivo uye kuvimba. Ndizvo zvandaizotsvaga mune nyanzvi pane chero chinyorwa kana indasitiri.
Nov 4, 2011 na12:52 PM
Doug, iyi inonakidza positi kune akati wandei zvikonzero.
1. Yakananga uye kune iyo pfungwa: Kwete BS Ini ndinoda kusvetuka maappetizers uye kusvika kune hombe kosi.
2. Zvakanyatsojeka: Chero geek anogona kufunga kuti angaite sei magariro enhau, asi nyanzvi dzinogadzira bhizinesi (aka "iyo pasi mutsara").
3. Ichokwadi: Tiri kuongorora miganho mitsva pano iri kuchinja uye kuchinja nekukurumidza. Vanamazvikokota chaivo ndivo vanovimba asi vakazvininipisa kuti vave vakatendeseka voti, “Handizivi”, vobva vawana mhinduro, pane kunyepedzera kuzviziva zvose.
Nov 4, 2011 na12:56 PM
Kutenda zvikuru, Mike!